DOWNLOAD 2GIS N'EFU NA EKWENTỊ GAM AKPORO GỊ - A GAM AKPORO - 2019
2GIS maka gam akporo
Na Intanet, n'otu oge, ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ iji tinye ihe atụ (onye e jidere na foto ụfọdụ) n'ime ebe ọzọ. Ọtụtụ mgbe nke a bụ ihe a na-akpọ "ụkpụrụ". Template bụ ọdịdị oyiyi nke dị iche site n'azụ na enweghị ihu.
Eleghi anya, cheta, olee otu nwatakiri ga-esi yie onye na-apịa ohi ma ọ bụ onye na-egbu ya? Ya mere, ọ dịghị mkpa inwe ụdị uwe a. O zuru ezu ịchọta template kwesịrị ekwesị na netwọk ma ọ bụ mepụta ya n'onwe gị.
Ọnọdụ bụ isi maka nchịkọta na-aga nke ọma nke template na foto bụ nkwụsị nke n'akuku. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ihe nkiri, a pụrụ igbanwe ihe nlereanya na nlele ọ bụla, mgbe ahụ maka foto dị adị nwere ike ịbụ nsogbu dị ukwuu ịhọrọ ụkpụrụ.
N'okwu a, ị nwere ike iji ọrụ freelancers, ma ọ bụ lelee ego akwụ ụgwọ, nke a na-akpọ fotobanks.
Ihe mmụta taa ga-abụ maka otu esi tinye ihu n'ime template na Photoshop.
Ebe ọ bụ na m na-achọ ihe oyiyi abụọ na ọha na eze, m na-ama nnọọ tinker ...
Mepee template na nchịkọta akụkọ ahụ, wee dọrọ faịlụ ahụ na njirimara na Photoshop. Anyị na-etinye àgwà ahụ n'okpuru oyi akwa na template.
Push CTRL + T ma hazie nha ihu ahụ ruo nha nke template ahụ. Ị nwere ike igbanwe oyi akwa n'otu oge ahụ.
Mgbe ahụ mepee ihe mkpuchi maka nchekwa akwa agwa.
Anyị na-ejiri ntọala ndị a:
Wepu ihe ngabiga site na iji ese ojii na-ekpuchi ebe a.
Otu usoro, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike ime n'elu oyi akwa na template.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịkpụzi ụda akpụkpọ anụ.
Gaa na oyi akwa ahụ na agwa ma tinye ntụpọ mgbanwe. "Mmiri / Saturation".
Na windo ntọala, gaa na-acha uhie uhie ma mee ka saturation dịkwuo elu.
Mgbe ahụ mee otu ihe ahụ na-acha odo odo.
Tinye nhazi ukpụhọde ọzọ "Ntugharị" ma dozie ya dị ka nseta ihuenyo.
N'ebe a, usoro nke itinye mmadụ n'oyiyi nwere ike iwere ya.
Na nhazi ọzọ, i nwere ike itinye agbakwunyere na foto toned, ma nke a bụ isiokwu maka ihe ọzọ ...